RASMI: Xidigii Real Madrid Ee Laga Helay Caabuqa Karoona Fayras Oo Fariin Soo Diray Iyo Diyaar Garowgii Madrid Ee Kulanka City Oo Xaalad Galay. - Gool24.Net
RASMI: Xidigii Real Madrid Ee Laga Helay Caabuqa Karoona Fayras Oo Fariin Soo Diray Iyo Diyaar Garowgii Madrid Ee Kulanka City Oo Xaalad Galay.
Kooxda Real Madrid ayaa xaalad cusub la kulantay ka hor diyaar garowgooda kulanka adag ee ay Champions league kukla ciyaari doonaan Manchester City kadib markii si rasmi ah loogu dhawaaqay in xidig ka mid ah kooxda kowaad uu ku dhacay caabuqa karoona Fayras.
Mariano Diaz ayaa laga helay cudurka sanadkan aduunka go’doonka galiyay ee karoonaha wuxuuna xidigani soo diray fariintii ugu horaysay tan iyo markii uu xaqiijistay in uu sido fayraska caabuqa karoonaha.
Arinta Mariano Diaz ayaa gil gishay diyaar garowgii kooxda kowaad ee Zinedine Zidane waxaana xidigan la galiyay karantiil wuxuuna u mahad celiyay taageerayaashii fariimaha u diray.
Mariano Diaz ayaa muuqaal uu soo duubay waxa uu soo dhigay baraha bulshada si uu jamaahiirtiisa ugu cadeeyo sida ay xaaladiisu tahay wuxuuna xaqiijiyay in caabuqa karoona uu ku dhacay balse aanu wax xanuun ah dareemayn.
Mariano Diaz ayaa fariintiisa ku yidhi: “Dhamaantiin waad ku mahadsan tihiin fariimaha taageerada ah.Wax xanuun ah ma dareemay, Ilaahay ayaa mahad ku eh.Qoyskeyga iyo dadka igu dhow way wada fiican yihiin. Hadda waxaan kartiil ku joogaa gurigayga”.
Mariano Diaz ayaa rajo fiican ka muujiyay in waqti dhaw uu ku soo laaban doono xaaladiisii caafimaad ee caadiga ahayd wuxuuna yidhi: “Waxaan rajeynayaa inaan dhawaan caadiga ku soo laaban doono oo aan dib u la midoobi saaxiibadayda kooxdayda”.
In Mariano Diaz laga helay caabuqa karoona Fayras waxay keenaysaa in uu seegi doono kulanka Real Madrid iyo Manchester City ee Champions league balse walwalka ugu wayn ee maamulka Madrid ayaa ah in ay soo bixi karaan xidigo kale oo ka sii muhiimsan Diaz oo cudurkani sidi kara.
Real Madrid waxay doonaysaa in ay ka soo kabsato guuldaradii kulankii lugtii kowaad ee ay Manchester City guuldarada ugala kulmeen tartanka Champions league laakiin xaalada cusub ee ka soo baxday kiiska fayraska karoonaha ee Mariano Diaz ayaa maskax ahaan u qasaysa Madrid.
Kulanka Real Madrid iyo Manchester City ee Champions league waxaa la ciyaari doonaa August 7 waana kulan uu Mariano Diaz seegi doono sida la xaqiijiyay.